ComPro अभिलेखागार - MUM मा कम्प्युटर प्रोफेशनल कार्यक्रम
कम्प्यूटर प्रोफेशनल कार्यक्रमको लागि संक्षिप्त
अगस्ट 6, 2019 /in ब्लग, विद्यार्थी सफलता कथाहरू /by cre8or
MUM स्नातक विद्यार्थी एक प्रेरणा हो!
लिंग सूर्य ("सुसी") बताउनको लागि एक अद्भुत कथा छ। उनी ग्रामीण चीनको एउटा सानो फार्ममा जन्मेकी थिइन। आज उनी न्यु योर्क शहरमा गुगल सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन्। उनले यो कसरी गरिन्?
चीनमा प्रारम्भिक जीवन
मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा लिंगको समुदायमा केटीहरू कहिल्यै हाई स्कूलमा गइहाल्दैनन्, र फार्मलाई सहयोग गर्ने र उनीहरूको आफ्नै परिवार हुने आशा गरिन्छ। वास्तवमा, उसले परिवारको आर्थिक आवश्यकताको साथ सहयोग गर्न परिवारको क्षेत्रमा काम गर्न 13 वर्षको उमेरमा स्कूल छोड्नुपर्‍यो।
तर फार्मको काम कडा थियो र लिंगलाई दुखी बनायो, त्यसैले उनले आफ्ना बुबालाई सोधिरहनुभयो, र अन्ततः उनले उनलाई स्कूलमा जान दिन राजी भए। उनको एक्सएनयूएमएक्स गाउँका साथीहरू मध्ये, लि Sun्ग रवि उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने एक मात्र थियो।
तर यस शिक्षाले उनलाई कलेजमा प्रवेश गर्न अनुमति दिँदैन, त्यसैले उनी शेन्जेनमा फ्याक्ट्री कामदार भइन। कामको तालिका बोरिंग थियो, त्यसैले उनले केहि महिना पछि कारखाना छोडिन् र कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रममा विद्यार्थी भएकी, आशा छ कि यसले उनलाई अझ व्यावसायिक जीवनको लागि कौशल प्रदान गर्दछ।
एन्ट्री-स्तर सफ्टवेयर ईन्जिनियर बन्न प्रशिक्षणको लागि भुक्तान गर्न, उसले तीन पार्टटाइम कामहरू गर्यो र तीन क्रेडिट कार्डमा बसी।
लिंग सुन परिवारका सदस्यहरूसँग हुनान प्रान्त गाउँमा।
पहिलो व्यावसायिक काम
सेप्टेम्बर 2011 मा, लिंग उनको पहिलो सफ्टवेयर ईन्जिनियरिंग काम शेन्जेनमा एक अनलाइन पेरोल प्रणाली को विकास मिल्यो। यो केहि समयको लागि महान थियो, तर उनी अझै ठूलो शहरमा अझ बढी सिपालु भएको महसुस गर्न चाहन्थे जहाँ अरूसँग बढी उन्नत ज्ञान र प्रमाणहरू छन्।
भर्खरको एउटा अन्तर्वार्तामा लिंगले दक्षिण चाइना मार्निंग पोस्टलाई बताइन कि उनको आधारभूत प्रेरणा सधैं "दिनदिनै नयाँ कुराहरू सिकिरहनु" रहेको छ। त्यसैले, जागिर जारी गर्दा उनले अंग्रेजी पढी र शेन्जेन विश्वविद्यालयको साथ एक दूरी शिक्षा डिग्री कार्यक्रममा नामांकन। धेरै ऊर्जा संग खेलाडी हुनु, उनले व्यायाम प्राप्त गर्न र अधिक सांसारिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको साथ अरुबाट अ learn्ग्रेजी सिक्नको लागि परम फ्रिसबी खेल्न पनि शुरू गर्नुभयो।
अमेरिका मा एक ठूलो अवसर
अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको संपर्कले लिंगलाई विश्वको अधिक हेर्नको लागि उत्साहित गर्‍यो। 2016 मा चिनियाँ रोजगार खोज्ने वेबसाइट हेर्दा, उनलेaका लागी एक विज्ञापन देखी अमेरिकी कम्प्यूटर विज्ञान मास्टर डिग्री कार्यक्रम जुन उनको लागि उत्तम देखिन्थ्यो: कम प्रारम्भिक लागत, एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक डिग्री कार्यक्रमको भागको रूपमा भुक्तानी पेशेवर इन्टर्नशिप प्राप्त गर्ने क्षमताको साथ। एक अमेरिकी कम्पनी मा इंटर्नशिपको दौरान दूरी शिक्षा संग जारी हुनेछ।
लिंग लागू गरियो र हाम्रोमा स्वीकार गरियो महाराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रबंधन मा कम्प्यूटर पेशेवर मास्टर कार्यक्रमशिकागोको दक्षिण पश्चिममा लगभग 230 माईल अवस्थित छ। नौ महिना क्याम्पसमा अध्ययन गरेपछि, बहुमूल्य क्यारियर रणनीति कार्यशाला र धेरै अन्तर्वार्ताहरू सहित, सूर्यलाई गुगल विक्रेता, ईपीएएम प्रणालीहरूको साथ सफ्टवेयर इञ्जिनियरको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
अक्टूबर 2017 मा MUM मा आइपुगेपछि लि Sun्ग सूर्य छ।
Google मा व्यावसायिक इंटर्नशिप भुक्तान गरियो
गुगलको म्यानहट्टन मुख्यालयमा ठेक्का सफ्टवेयर ईन्जिनियरको रूपमा लिingले शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयका सहकर्मीहरू पाएकोमा भाग्यशाली महसुस गर्यो — कोही पीएच.डी. डिग्री "तर तिनीहरू मध्ये कसैले पनि मेरो जस्तो व्यवहार गर्दैनन् किनभने म यो सबैको योग्य छैन,"उनले साउथ चाइना मोर्निंग पोस्टसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन। "यही कुरा अमेरिकाको बारेमा मलाई मनपर्‍यो: उनीहरूले तपाईले गरेको कामलाई भन्दा तपाईले गर्न सक्ने चीजहरूको मोल गर्छन्।"
एमयूएममा बिताएको समयको बारेमा, उहाँ विशेष शैक्षिक वातावरण, विद्यार्थी र संकाय जनसंख्याको विविधता, र यहाँ बनाइएका धेरै साथीहरूको सराहना गर्नुहुन्छ। उनी थप्छिन्, "फेयरफिल्डमा बिताएको हरेक पल मलाई मनपर्‍यो (MUM मा)।"
उनको सल्लाहकार प्रोफेसर मेई ली भन्छिन्, "सुजी जहिले पनि आफ्ना सबै गतिविधिहरूमा अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहित थिईन्। उनी एक राम्रो विद्यार्थी थिए, सबैका साथी थिई, र खेलकुदलगायत धेरै क्षेत्रमा असाधारण प्रतिभाशाली। "
लि Sun्ग सूर्य अन्तिम फ्रिस्बी साथीको साथ।
डिसेम्बर 2019 मा उनको स्नातकोत्तर डिग्री पूरा गरेपछि, लि hopes्ग आशा गर्छिन् कि उनका आमा बुबा अमेरिका अमेरिका आएर उनको क्याम्पसमा स्नातक हेर्न आउनेछन्। यो उनको आमाको लागि पहिलो पटक हो चीनमा आफ्नो गृहनगर छोड्न!
लिंग सूर्यको अर्को व्यावसायिक लक्ष्य भनेको घरभित्र रहेको Google सफ्टवेयर ईन्जिनियर बन्नु हो। उनी भन्छिन्, "यो सजिलो हुँदैन, तर तपाईको जीवन तपाईको आराम क्षेत्रको अन्तमा सुरु हुन्छ।"
लिंग सूर्यको उल्लेखनीय जीवनको बारेमा बढी पढ्न, कृपया यसलाई पढ्नुहोस् लेख दक्षिण चीन प्रभात पोष्टमा।
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Sun-Ling-at-Google-from-Sun-Ling.png 800 1200 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2019-08-06 21:09:152019-09-26 21:43:16गुगल सफ्टवेयर इञ्जिनियर ग्रामीण ग्रामीण फार्ममा लग्यो